अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा क्यानडाकी कप्तान क्रिष्टिनले बनाइन दुर्लभ किर्तिमान – Khel Dainik
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा क्यानडाकी कप्तान क्रिष्टिनले बनाइन दुर्लभ किर्तिमान
एजेन्सी । क्यानडाकी महिला फुटबल टोलीकी कप्तान क्रिष्टिन सिन्क्लेयरले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पुरुष र महिला दुवैतर्फ गरेर सर्वाधिक गोल गर्ने किर्तिमान आफ्नो नाममा गराउन सफल भएकी छिन् ।
३६ बर्षे क्रिष्टिनले टेक्सासमा भएको टोक्यो ओलम्पिक छनौटतर्फ सेन्ट किट्स एण्ड नेविस विरुद्ध गोल गर्दै यो दुर्लभ उपलब्धी हासिल गरेकी हुन् । त्यो खेलमा क्यानडा ११–० ले विजयी भएको थियो । साथै क्रिष्टिनले त्यसमा दुई गोल समेत गरेकी थिईन् ।
यो गोलसँगै उनको अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या १८५ पुग्यो । जुन एक किर्तिमानी उपलब्धी थियो । यसअघि यो किर्तिमान अमेरिकी खेलाडी एबी वेमब्याकको नाममा थियो । वेमब्याकले कुल १८४ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेकी थिईन् ।
स्मरण रहोस, पुरुषतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको किर्तिमान इरानका लिजेण्ड अली दाइको नाममा छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा कुल १०९ गोल गरेका छन् ।
THERE’S THE RECORD! 🥇
Christine Sinclair is now the ALL-TIME international scoring leader with 1️⃣8️⃣5️⃣ goals! pic.twitter.com/Px5tXBv7VW
यो सूचीमा पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो दोस्रो स्थानमा छन् । उनले पोर्चुगलका लागि हालसम्म १६४ म्याचमा ९९ गोल गरिसकेका छन् । साथै, आगामी दिनमा उनले अली दाईको किर्तिमान तोड्न सक्ने बलियो सम्भावना पनि छ ।
यो सूचीमा अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसी भने १५औं स्थानमा छन् । मेसीले हालसम्म अर्जेन्टिनाका लागि १३८ म्याचमा ७० गोल गरेका छन् ।
← ओलम्पिक छनौटको आयोजना अधिकार चीनबाट खोसियो पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोलाई अर्को अवार्ड →